गुरुत्वाकर्षण छालहरु: ती के हुन्, विशेषताहरु, उत्पत्ति र महत्व | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामीलाई थाहा छ कि भौतिक विज्ञानको क्षेत्रसँग धेरै पक्षहरू छन् जुन धेरै मानिसहरूलाई बुझ्नको लागि यसलाई गाह्रो बनाउँदछ। यी मध्ये एउटा पक्ष हो गुरुत्वाकर्षण तरंगहरु। यी छालहरू वैज्ञानिकले भविष्यवाणी गरेका थिए अल्बर्ट आइन्स्टाइन र ती भविष्यवाणी पछि १०० बर्ष पछि पत्ता लाग्यो। तिनीहरू आइनस्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तमा विज्ञानको लागि सफलता प्रदर्शन गर्दछन्।
त्यसकारण हामी तपाईलाई गुरुत्वाकर्षण तरंगहरु, उनीहरुको विशेषताहरु र महत्वहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउन यो लेख समर्पित गर्दैछौं।
1 गुरुत्वाकर्षण छालहरु के के हुन्?
3 मुख्य विशेषताहरू र गुरुत्वाकर्षण तरंगहरूको उत्पत्ति
4 पत्ता लगाउनुहोस् र महत्त्व
गुरुत्वाकर्षण छालहरु के के हुन्?
हामी अन्तरिक्ष-समयमा गडबडीको प्रतिनिधित्वको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन एक गतिवर्धित विशाल शरीरको अस्तित्वबाट उत्पन्न हुन्छ जुन प्रकाशको गतिमा सबै दिशामा ऊर्जाको विस्तार गर्दछ। गुरुत्वाकर्षण छालहरूको घटनाले स्पेस-समयलाई आफ्नो मूल अवस्थामा फर्कन सक्षम नगरी तान्नको लागि अनुमति दिन्छ। यसले माइक्रोस्कोपिक गडबडी पनि उत्पन्न गर्दछ जुन केवल उन्नत वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरूमा मात्र महसुस गर्न सकिन्छ। सबै गुरुत्वाकर्षण गडबडी प्रकाशको गतिमा प्रचार गर्न सक्षम छ।
तिनीहरू प्राय: दुई वा सोभन्दा बढी अन्तरिक्ष शरीरहरूको बीचमा उत्पादन हुन्छन् जुन ऊर्जाको प्रसार उत्पादन गर्दछ जुन सबै दिशामा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। यो एक घटना हो कि स्पेस-समयको विस्तार यसरी हुन्छ कि यसले आफ्नो मूल अवस्थामा फर्कन सक्दछ। गुरुत्वाकर्षण छालहरूको खोजीले यसको छालहरू मार्फत ठाउँको अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। यसका लागि धन्यवाद, अन्य मोडेलहरू अन्तरिक्षको व्यवहार र यसका सबै सुविधाहरू बुझ्नको लागि प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
यद्यपि अल्बर्ट आइनस्टाइनको आफ्नो अन्तिम सापेक्षतामा सापेक्षता सिद्धान्तले गुरुत्वाकर्षण तरंगहरूको वर्णन गरे पनि ती शताब्दी पछि फेला पर्‍यो। यसैले, यी गुरुत्वाकर्षण तरंगहरूको अस्तित्व आइनस्टाइनले औंल्याए कि प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ। यस वैज्ञानिकका अनुसार यस प्रकारका छालहरूको अस्तित्व गणितिय व्युत्पन्नबाट आएको हो जसले भन्यो कि कुनै वस्तु वा संकेत प्रकाश भन्दा छिटो हुन सक्दैन।
सन् १ Already 2014 Already मा यस शताब्दी पछाडि बीईसीपी २ वेधशालाले गुरुत्वाकर्षण तरंगहरूको अन्वेषण र टेरेसहरू घोषणा गर्‍यो जुन ब्रह्माण्डको विस्तारको क्रममा उत्पन्न भएको थियो। बिग बैंग। चाँडै यो समाचार अस्वीकार गर्न सकिन्छ जब यो वास्तविक थिएन भनेर देख्दा।
एक बर्ष पछि LIGO प्रयोगका वैज्ञानिकहरूले यी छालहरू पत्ता लगाउन सक्षम भए। यस तरिकाले, उनीहरूले समाचार घोषणा गर्न उपस्थित हुने निश्चित गरे। यसैले, यद्यपि खोज २०१ 2015 मा थियो, उनीहरूले २०१ in मा यो घोषणा गरे।
मुख्य विशेषताहरू र गुरुत्वाकर्षण तरंगहरूको उत्पत्ति
आउनुहोस् हामी हेरौं कि सबैभन्दा प्रतिनिधित्व गर्ने विशेषताहरू के हो जसले गुरुत्वाकर्षण तरंगहरूलाई हालसालैका वर्षहरूमा भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोजीहरू बनाउँदछन्। यी गडबडीहरू हुन् जसले स्पेस-टाइमको आयामलाई यस्तो तरिकाले बदल्छ कि यसले यसलाई मूल स्थितिमा फर्कन अनुमति नदिई यसलाई अलग गर्न मद्दत गर्दछ। मुख्य विशेषता भनेको तिनीहरू प्रकाशको गति र सबै दिशामा प्रचार गर्न सक्षम छन्। तिनीहरू ट्रान्सभर्स तरंगहरू हुन् र ध्रुवीकरण गर्न सकिन्छ। यसको मतलब यो पनि यसको चुम्बकीय प्रकार्य छ।
यी छालहरूले उच्च वेग र धेरै टाढा ठाउँहरूमा ऊर्जा ढुवानी गर्न सक्दछन्। गुरुत्वाकर्षण छालहरू बारे उठ्ने श raised्का मध्ये एउटा यो हो कि यसको उत्पत्ति यसको सम्पूर्णतामा निर्धारण गर्न सकिदैन। तिनीहरू प्रत्येक फ्रैक्वेंसीमा देखा पर्न सक्छन् प्रत्येक को तीव्रता को आधार मा।
यद्यपि यो पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन, त्यहाँ धेरै वैज्ञानिकहरू गुरुत्वाकर्षण तरंगहरु कसरी उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न कोशिस गर्दैछन्। तिनीहरू गठन गर्न सकिने सम्भावित अवस्था के हो हेरौं:
जब दुई वा धेरै धेरै उच्च मास स्पेस निकायहरू एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्छन्। यी जनहरू गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभावको लागि विशाल हुनुपर्दछ।
दुई कालो प्वालको कक्षाको उत्पादन।
ती दुई आकाशगंगाको टकरावबाट उत्पन्न गर्न सकिन्छ। स्पष्ट रूपमा, यो त्यस्तो चीज हो जुन प्रत्येक दिन हुँदैन
तिनीहरू उद्भव गर्न सक्दछ जब दुई न्यूट्रनको कक्षा सँगै हुन्छ।
पत्ता लगाउनुहोस् र महत्त्व
आउनुहोस् अब संक्षिप्त रूपमा LIGO वैज्ञानिकहरूले कसरी यी प्रकारका छालहरू पहिचान गर्न सक्षम भएका छन् विश्लेषण गर्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूले माइक्रोस्कोपिक आकारको गडबडी उत्पन्न गर्छन् र ती केवल टेक्नोलोजीमा उच्च उन्नत उपकरणहरू द्वारा पत्ता लगाउन सकिन्छ। मैले यो पनि मनमा राख्नु पर्छ कि यी उपकरणहरू धेरै नाजुक छन्। तिनीहरू ईन्टरफेरोमिटरहरूको नामबाट चिनिन्छन्। तिनीहरू धेरै किलोमिटर टाढा सुरंगहरूको प्रणालीबाट बनेका छन् र एल आकारमा व्यवस्थित छन्। लेजरहरू यी किलोमिटर लामो सुरुnelहरूमा पार हुन्छन् जुन ऐनामा बाउन्स हुन्छ र क्रस गर्दा हस्तक्षेप गर्दछ। जब गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशट हुन्छ यो खाली स्थानमा विकृति द्वारा पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। स्थिर गठन इन्टरफेरोमिटरमा मिररहरूको बीचमा हुन्छ।
अन्य उपकरणहरू जसले पनि गुरुत्वाकर्षण तरंगहरू पत्ता लगाउन सक्छन् रेडियो टेलिस्कोपहरू हुन्। त्यस्ता रेडियो टेलिस्कोपहरूले पल्सरबाट प्रकाश नाप्न सक्छन्। यी तरंगहरूको पहिचानको महत्त्व के हो जुन मानव मानिसहरूलाई ब्रह्माण्डको राम्रो अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ। र के ती यी तरंगहरूका लागि धन्यवाद तपाई राम्ररी कम्पनहरू सुन्न सक्नुहुनेछ जुन अन्तरिक्ष-समयमा विस्तार हुन्छ। यी छालहरूको खोजीले ब्रह्माण्ड विकृत हुन सक्छ र सबै विकृति विस्तार र एक तरंग आकार संग अन्तरिक्ष मा संकुचन गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न यो संभव भएको छ।
यो ध्यान दिनुहोस् कि गुरुत्वाकर्षण तरंगहरू बन्नको लागि, कालो प्वालहरूको टकराव जस्ता हिंसात्मक प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। यी तरंगहरूको अध्ययनको लागि धन्यवाद छ जुन जानकारीहरू पाउन सकिन्छ कि यी घटनाहरू र प्रलयहरू ब्रह्माण्डमा हुन्छन्। सबै घटनाहरूले भौतिक विज्ञानको क्षेत्र भित्रका धेरै आधारभूत कानूनहरू बुझ्न र व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ। यसका लागि धन्यवाद, जानकारीको एक ठूलो मात्रा अन्तरिक्ष, यसको उत्पत्ति र कसरी ताराहरू विरूद्द वा हराउनेछ बारेमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यी सबै जानकारी ब्ल्याक होलको बारेमा अधिक जान्नको लागि पनि व्युत्पन्न गरिएको छ। गुरुत्वाकर्षण तरंगको उदाहरण यो ताराको विस्फोटनमा फेला पर्दछ, दुई उल्का पिण्डहरूको टकराव वा कालो प्वालहरू बनाउँदा। यो एक सुपरनोवा विस्फोटमा पनि पाउन सकिन्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं गुरुत्वाकर्षण तरंगहरु र उनीहरुको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » गुरुत्वाकर्षण तरंगहरू